कुलमानलाई स्वीकार्न किन गाह्रो मान्छ राजनीतिक नेतृत्व ? – Nepal Press
कुलमानलाई स्वीकार्न किन गाह्रो मान्छ राजनीतिक नेतृत्व ?
२०७८ साउन १३ गते ८:०३
केही समयअघि विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले एउटा टेलिभिजन अन्तरवार्तामा ‘कुलमान घिसिङलाई नेशनल हिरो अर्थात राष्ट्रिय नायक’को संज्ञा दिए । तर यस्ता राष्ट्रिय नायकको नायकत्वलाई देशले कुन रुपमा उपयोग गर्न सक्छ भन्ने खासै चर्चा चलेको पाइँदैन ।
प्रकाशित: २०७८ साउन १३ गते ८:०३
One thought on “कुलमानलाई स्वीकार्न किन गाह्रो मान्छ राजनीतिक नेतृत्व ?”
राम योगी says:
कुलमानको बारेमा शंकै छैन । तर शिर्ष कको किन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने या खोज्ने या आफ्नै तर्क पनि दिए हुन्थ्यो नि लेखक ज्यू। खाली काम र याजनाका बेलिविस्तार मात्रै।